“काठमाडौँ लाई मान्छे मनपर्छ” | Seto Khabar
डा. सरोज अधिकारी
काठमाडौंलाई टाउकै टाउको मन पर्छ ।
काठमाडौंलाई भिडभाड र कोलाहल मनपर्छ। Lockdown को बेलाको शून्यता काठमाडौंलाई मन परेन जस्तो लाग्छ। त्यसैले छिट्टै काठमाडौंले त्यो शून्यता र मौनता तोडे जस्तो लाग्छ। अनि मलाई पनि काठमाडौंको भिडभाड नै मन पर्छ। भिडभाडमा, गाडीको अनवरत टिटी, टाटा मै काठमाडौं, रमाएझै लाग्छ। मान्छे मान्छेको होहल्लामै काठमाडौं सुसज्जित छ।
असनको गल्लीमा टाढा टाढा सम्म मान्छेका टाउकै टाउका देखिदा मन खुशी हुन्छ। इन्द्रचोकम डुल्दा ठेलम ठेल हुँदाको मजा अर्कै छ। त्यो असनको गल्ली के गल्ली जहाँ भीड हुन्न? त्यो इन्द्रचोकको महत्त्व कत्ति हुन्न जब हिँड्दा ठेल मठेल हुन्न।
त्यो रत्नपार्कको के अर्थ जब त्यहाँ गाडी कुर्ने र चढ्नेको लर्को हुन्न। जब म काठमाडौंको सडकमा यात्रा गर्छु, मन प्रफुल्ल हुन्छ। थरीथरीका अनुहार देख्दा, हिमाल, पहाड र तराई सबैको झल्को यहीँ पाउँदा।
आहा! कति मजाको शहर, जहाँ देशभरिका प्रतिनिधि छन्, जहाँ सिङ्गो नेपालको झल्को पाइन्छ, जहाँ राजादेखि रङक अटेका छन्। सबैलाई काठमाडौंले पालेकै छ, सबैलाई ओत दिएकै छ।‌ सबैलाई घरको ओत दिन नसकेपनि काठमाडौंको सडकपेटी सधैँ बास दिनलाई तम तयार छ‌ । त्यसैले होला काठमाडौंलाई मान्छे मन पर्छ। काठमाडौ कहिले थाके जस्तो लाग्दैन मान्छे धेरै भएर, बरु लाग्छ ती सारा नेपालभरका मान्छे उल्टेर आएपनि काठमाडौँ सबैलाई अटाउन तयार छ। सबैलाई खाना, नाना र छाना दिन काठमाडौं राजी छ।
म त काठे । काठमाडौको रैथाने । हेरिरहेछु बुझ्ने भएदेखि यसलाई नियालेर। देशभरका मान्छे नआए काठमाडौं के महत्व । काठमाडौंको महत्व बढेको छ थरी थरी मान्छे आएर त। ती रंगीबिरंगी मान्छेहरु नथुप्रिँदा हुन त काठमाडौँ के लाई काठमाडौँ ? कोरोना कालको जस्तो मौनतामा काठमाडौंको के उदपादयता? काठमाडौंको फुटपाथले पनि मान्छे पाल्छ। काठमाडौंको मठ -मन्दिरले पनि ज्यान पालेकै छ। कहिले थाकेन यो शहर । कहिले रिसाएनन् यसका गल्ली र सडकहरु । काठमाडौंका सडकहरु धेरै गाडीले, धेरै भिडभाडले भत्किएका छन, चर्केका छन्, तर पनि यसले मान्छेलाई माया गर्न छाडेको छैन। जति मान्छे आउन खुला छातीले स्वागत गर्न काठमाडौ सधैं आतुर छ‌, यसैमा काठमाडौँको महानता छ ।
त्यसैले लाग्छ कि काठमाडौंलाई मान्छे नै मान्छे मनपर्छ। टाढा टाढाको छितिज सम्म देखिने टाउकै टाउका मन पर्छ‌ । सायद पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका, हिमाल देखि तराई सम्मका मान्छे नआउँदा हुन त यसको माटोको के महत्व ? आज देशभरका मान्छे थुप्रिएका छन् र त काठमाडौंको माटो किम्ति छ। आज भिर भिरको भाउ बढेको छ, ‌गल्ली गल्लीको मूल्य चर्केको छ‌ ।
त्यसैले लाग्छ मान्छेले काठमाडौँ चाहन्छ र काठमाडौंले सधैभरी मान्छे चाहन्छ। यो मान्छे र काठमाडौ विचको माया सधैं भरि यसरि नै झाङ्गीरहोस। यी दुईको प्रीत यसरी नै जुग जुगलाई टिकिरहोस‌!!
[ डा. अधिकारी मानसिक अस्पतालमा कार्यरत छन्।]